စိတ်ဖိစီးမှုများလွန်းနေကြောင်း ခန္ဓာကိုယ်ကဖော်ပြနေတဲ့ လက္ခဏာ (၃) ခု… - CeleLove
March 19, 2020 CeleLove ဘ၀နှင့်ပညာပေး 0
လူတိုင်းမှာ ကိုယ့်ဘဝနဲ့ကိုယ် တာဝန်ကိုယ်စီ၊ ဝတ္တရားကိုယ်စီထမ်းဆောင်ရင်း စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ ပင်ပန်းမှုတွေဆိုတာ ရှိပါတယ်။ တစ်ခါတလေကျတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် ဂရုမစိုက်အားတော့တဲအထိကို အလုပ်တွေ၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေဟာ များနေတတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ် …. ။
ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ စိတ်ဖိစီးမှုများလွန်းတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်လည်း အတော်ပင်ပန်းနေပြီး အနားယူဖို့လိုအပ်နေတဲ့ လက္ခဏာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ (၃)ချက်ကို ကြုံတွေ့နေတယ်ဆိုရင်တော့ လုံးဝကို မပေါ့ဆသင့်တော့ပဲ အနားယူဖို့၊ လိုအပ်တဲ့ ဆေးဝါးကုသမှု ခံယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော် … ။
သင်ဟာ အမြဲတမ်းပင်ပန်းပြီး နုံးချိနေသလိုခံစားရမှာဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် ညနေပိုင်းတွေမှာ ပိုလို့တောင် ပင်ပန်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ စားသောက်မှုပုံစံကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်သင့်နေပါပြီ။ သင့်ကို အမြန်ဆုံး အားဖြည့်ပေးနိုင်မယ့် ဆန်၊ ပဲနီနဲ့ အစိမ်းရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို စားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။ သွားရည်စာတွေနဲ့ အဆီများတဲ့အစားအစာတွေကို လျှော့ပြီး စားသုံးသင့်ပါတယ်။
(2) မကြာခဏ ခြေထောက်ကြွက်တက်ခြင်း
တကယ်လို့သင့်ခြေထောက်ဟာ မကြာခဏ ကြွက်တက်လေ့ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ ခန္ဓာကိုယ်မှာ မဂ္ဂနီဆီယမ်နဲ့ ပိုတက်ဆီယမ်ချို့တဲ့တာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဟင်းနုန်ွယ်ရွက်၊ ပဲကတ္တီပါနဲ့ အစိမ်းရောင် အသီးအရွက်တွေကို နေ့စဉ်စားသုံးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
တကယ်လို့သင်ဟာ ဝက်ခြံထွက်လေ့ရှိတဲ့သူမျိုးမဟုတ်ပဲ ဝက်ခြံတွေထွက်လာပြီ၊ အဖုတွေထွက်လာပြီ ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ များပြားလွန်းလို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဝက်ခြံတွေ အကြောင်းမရှိထွက်လာနေပြီဆိုရင်တော့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုလျှော့ပြီး အိပ်ရေးဝဝအိပ်သင့်ပါတယ်။
စိတျဖိစီးမှုမြားလှနျးနကွေောငျး ခန်ဓာကိုယျကဖျောပွနတေဲ့ လက်ခဏာ (၃) ခု…
လူတိုငျးမှာ ကိုယျ့ဘဝနဲ့ကိုယျ တာဝနျကိုယျစီ၊ ဝတ်တရားကိုယျစီထမျးဆောငျရငျး စိတျဖိစီးမှုတှေ၊ ပငျပနျးမှုတှဆေိုတာ ရှိပါတယျ။ တဈခါတလကေတြော့ ကိုယျ့ကိုယျကိုတောငျ ဂရုမစိုကျအားတော့တဲအထိကို အလုပျတှေ၊ စိတျဖိစီးမှုတှဟော မြားနတေတျတာပဲဖွဈပါတယျ …. ။
ခုဖျောပွပေးမှာကတော့ စိတျဖိစီးမှုမြားလှနျးတာကွောငျ့ ခန်ဓာကိုယျလညျး အတျောပငျပနျးနပွေီး အနားယူဖို့လိုအပျနတေဲ့ လက်ခဏာတှပေဲဖွဈပါတယျ။ ဒီ (၃)ခကျြကို ကွုံတှနေ့တေယျဆိုရငျတော့ လုံးဝကို မပေါ့ဆသငျ့တော့ပဲ အနားယူဖို့၊ လိုအပျတဲ့ ဆေးဝါးကုသမှု ခံယူဖို့လိုအပျပါတယျနျော … ။
သငျဟာ အမွဲတမျးပငျပနျးပွီး နုံးခြိနသေလိုခံစားရမှာဖွဈပွီး အထူးသဖွငျ့ ညနပေိုငျးတှမှော ပိုလို့တောငျ ပငျပနျးနမှောဖွဈပါတယျ။ ဒါဆိုရငျတော့ သငျ့ရဲ့ စားသောကျမှုပုံစံကို ပွနျလညျဆနျးစဈသငျ့နပေါပွီ။ သငျ့ကို အမွနျဆုံး အားဖွညျ့ပေးနိုငျမယျ့ ဆနျ၊ ပဲနီနဲ့ အစိမျးရောငျ ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှကေို စားသုံးပေးသငျ့ပါတယျ။ သှားရညျစာတှနေဲ့ အဆီမြားတဲ့အစားအစာတှကေို လြှော့ပွီး စားသုံးသငျ့ပါတယျ။
(2) မကွာခဏ ခွထေောကျကွှကျတကျခွငျး
တကယျလို့သငျ့ခွထေောကျဟာ မကွာခဏ ကွှကျတကျလရှေိ့တယျဆိုရငျတော့ ဒါဟာ ခန်ဓာကိုယျမှာ မဂ်ဂနီဆီယမျနဲ့ ပိုတကျဆီယမျခြို့တဲ့တာကွောငျ့ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဟငျးနုနျှယျရှကျ၊ ပဲကတ်တီပါနဲ့ အစိမျးရောငျ အသီးအရှကျတှကေို နစေ့ဉျစားသုံးပေးဖို့လိုအပျပါတယျ။
တကယျလို့သငျဟာ ဝကျခွံထှကျလရှေိ့တဲ့သူမြိုးမဟုတျပဲ ဝကျခွံတှထှေကျလာပွီ၊ အဖုတှထှေကျလာပွီ ဆိုရငျတော့ သငျ့ရဲ့ စိတျဖိစီးမှုတှေ မြားပွားလှနျးလို့ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဝကျခွံတှေ အကွောငျးမရှိထှကျလာနပွေီဆိုရငျတော့ စိတျဖိစီးမှုတှကေိုလြှော့ပွီး အိပျရေးဝဝအိပျသငျ့ပါတယျ။